Sideen u Dhoofiyaa Shirkaddayda 'Hemp Interstate'? | Soodhawaynta
Maraakiib Hemp Sharci ahaan
Sideen u Dhoofiyaa Shirkaddayda 'Hemp Interstate'?
Sharciga Beeraha ee 2018 wuxuu si cad u siinayaa dhoofinta xudunta ah ee hemp, laakiin taasi micnaheedu maahan in fulinta sharciga gobolka uu qaddariyo farqiga u dhexeeya rarkaaga xashiishadda mid ka badan 0.3% THC. Dadku wali waa lagu xiray isagoo raacaya ubaxa hemp oo si sharci darro ah u curyaamiya.
sida loo rarka ubaxa hemp
Shantaas qodob ku qor liistadaada diritaanka hemp interstate.
warqad (ogeysiis) xoojinta sharciga.
eeyaha daroogada kama warami karo marijuana hemp
COA waxay cadeyneysaa hemp
laysanka iyo diiwaangelinta haysashada
u wad caqli iyo badbaado.
Waan ka wada hadli doonnaa Hemp Maraakiibta badbaado iyo dabool qodobbada kore, kuwaas oo sidoo kale ku jira fiidiyowga. Nasiib wacan shirkadaada markab dushooda. La tasho a hemp qareen ku saabsan ganacsigaaga si loo hubiyo ka ilaalinteeda qatarta gaadiid.
Si taxaddar leh u qorsheyso Shixnadda Dhiigga ee Shirkaddaada
In 2019, hemp waa federaal sharci ah laakiin aan lahayn sharciyo la'aan. Beerista iyo socodsiinta Hemp waxay u baahan tahay u hogaansanaanta mid ka mid ah shuruucda federaalka barnaamijkii hore ee Hemp Pilot, ama sharci kale oo gobol oo oggolaanaya abuurista hemp. USDA waxay haysataa ilaa 2020 inay sii deyso xeerarkeedii ugu dambeeyay ee hemp. Suuqyada badeecada Hemp si buuxda uma bislaan.
Xilliga soo koraya ee 2019 wuxuu noqon doonaa kii ugu balaarnaa oo ay yeeshaan Dowlada Mareykanka muddo tobanaan sano ah. Maraakiibta hemp ayaa soo kici doona, sharci fulintiisana waxaa laga yaabaa inay jahwareerin dalagyada xashiishada sharci darrada ah. Waa tan sida loo helo hemp meeshiisa si amaana.
Yeelo Qorshe Si Aad Ku Geyso Hemp
Wac qorshe, ama nidaamka shirkada, shixnadda hemp ma aha sida qamadiga oo kale maxaa yeelay cops-ka kama soo baxayaan xirmooyinka hadhuudhka 80-kii sano ee la soo dhaafay.
Qorshahaagu waa inuu kujiraa habraaca qaadista rarka iyo xirmooyin dukumiinti ah oo cadeynaya sharciga ganacsiga. Warqad loo diro hayadaha fulinta sharciga ayaa ku bixin kara waxoogaa cadeyn ah sharciga cusub oo ka jawaab su'aalahooda
Ogeysiis Ku Dhaqan Gelinta Sharciga Hemp Shipment
Waraaq, ama ogeysiis, si loogu dhaqan geliyo sharciga haddii ay dhacdo in la xayiro hemp waxay gacan ka geysan doontaa in la muujiyo sababta ay shirkaddaadu u sameyneyso inay yihiin sharci buuxa.
Warqad wanaagsan oo loogu talagalay xoojinta sharciga ayaa:
sheeg sharciga federaalka ee ku saabsan hemp
tixraac sharciga federaalka ee ku saabsan dhoofinta hemp-ka mareykanka ah
culayskan sharciga gobolka ee fasaxaya waxqabadka shirkaddaada
tixraac shahaadooyinka hemp ee falanqaynta (COA)
u sharax eeyaha daroogada waxay leeyihiin digniinta beenta ah ee beenta ah maxaa yeelay terpenes-ka hemp
sii macluumaadka xiriirka ee looyarkaaga.
Dogs Dogs Kama Shaqeyso Markab Hemp
Kiimikada ka dhigaysa xashiishadda xashiishadda sharci-darrada ah waa xashiishadda cannabinoid ee loo yaqaan Delta-9 THC, ama mararka qaarkood gaabinaysa kaliya THC. Eeygu uma urin karo kiimikadan sababta oo ah waa ur. Taa bedelkeed, eeyaha daroogada waxaa loo tababaray inay urta urta dhirta loo yaqaan 'cannabis' qaarkood. Dheecaannadaasi waxay caan ku yihiin hemp ama marijuana. Waa tan ugu badan terpenes caadi ah oo laga helo hemp.
Dheecaannadaas ayaa ah sababta urta iyo dhadhanka hemp, ama marijuana, ay u leeyihiin kala duwanaanshaha noocaas ah. Eeyaha daroogada ayaa urta kaliya dhowr lammaane. Eeyaha daroogada ayaa urta beta-caryophyllene. Gaar ahaan, Eeyaha daroogada waxay urta urka Caryophyllene oxide, taasoo ah soosaarida xashiishadda cannabis, maxaa yeelay caryophyllene waa tan ugu caansan terpinoid.
Eeyaha maandooriyaha ayaa waliba urta u ah Pinene, ama burooyinka jirka, sababta oo ah sida loo yaqaan 'pinene' oo loo yaqaan 'cannabis' iyo marka lagu daro caryophyllene, natiijada ayaa inta badan cannabis - laakiin cannabis sidoo kale waxaa ku jira hemp.
Hesho Shahaadooyin Falanqeyna oo la xiriira Soo Dejinta Hemp
Shahaadada Falanqaynta (COA) waa ballanqaad ay sameeyeen xarun tijaabo ah oo ku saabsan waxa ku jira cagaarshowga la tijaabiyay. Dawladuhu had iyo jeer waxay ansixiyaan tas-hiilaadyo tijaabo ah oo wax ka qabanaya tijaabinta hemp warshadaha si aysan dawladu qasab ku ahayn inay qorto shaqaale badan. Shirkadahaan tijaabinta waxay baarayaan xashiishadda cannabis, ama hemp ama marijuana, waxayna bixiyaan COA wixii ku jira. Dhamaan macluumaadka kiimikada ee warshad cannabis waa in lagu siiyaa COA, laakiin waa kuwan qodobbada ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin in lagu daro:
Shirkadda fulisay tijaabada shaybaarka
Sheybaarka waa shirkad sedexaad oo ka socota beeraleyda
astaanta cannabinoid ee hemp
astaanta guud (dhibcaha gunnada)
Falanqaynta Birta culus
Falanqaynta sunta cayayaanka
Dhoofinta cagaarshow ee saxda ah waxay u baahan tahay lahaansho dhinac saddexaad madaxbanaan oo COA leh shixnad lafteeda ah Waraaqda loogu tala galay xoojinta sharciga sidoo kale waa inay kujirtaa COA oo ah bandhig si loo sii wado waxbarida loona xaliyo wixii jahwareer ah si loo yareeyo fursadaha markabkaaga hirarka ..
Qorsheyso Wadadaada Maraakiibta Hemp
Kani waa ilaha laga helo fiidiyowga ku siinaya khariidad midab leh si aad u aragto waxa ay gobolladu u oggol yihiin hemp iyo kuwa aan dooneynin.
HAMP SHEEKADA MAP HALKAN.
Xusuusnow, qabqabashada badankood si fudud ugama dhacdo Idaho, ama Iowa, ama dowlad aan cirib tirnayn. Xitaa dowladaha sharciyada hemp sharciga ah waxay ku wareereen fulinta sharciga waxayna dhalisay xarig aan loo baahnayn. Sababta ugu badan ee aad u leedahay qorshe, u qor faylkaaga gaadiid, iyo sidoo kale ..
dhoofinta hemp halis maaha
U kaxee Smart & Amni Markaad Duuleyso Hemp
Taas micnaheedu waa iyada oo aan la sheegin, laakiin weli waa la sheegayaa. Hayso darawalka saxda ah. Hubi dhammaan calaamadaha leexashada iyo nalalka dabadaba. Ka fogow fursad kasta oo aan caadi ahayn oo ah in lagu wareejiyo - ama shil galo. Ha qorin hana wadin baabuur. Ha cabbin oo ha wadin baabuur. Ha ku wadin ruqsad waqtigeedii dhacay… iyo wixii la mid ah. Noqo xariif markii aad dhoofiso.
Nasiib wacan inaad ku beerto mirahaaga hemp cusub.
Soo wac haddii aad jeceshahay inaad qareenkeena kala hadashid mashruucaaga hawleed. Waad ku mahadsan tahay oo xor ayaad u tahay inaad la wadaagto tan haddii aad ka heshay qiimo.